1: 1 Barnaamijka iPad-ka Su'aalaha La Weydiiyo | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Degmadu ma bixisaa barnaamijka caymiska ipadka?
Canuggaygu ma keeni karaa ipadkiisa / keeda iskuulka dugsiga?
Ardeydu ma inay maal gashadaan kumbuyuutarka bireedka ah
Caqli gal ma tahay in la helo qoraal lagu qoro iPad-ka waxqabadyada iyo mashaariicda kala duwan?
Sidee ardaydu u badbaadin doonaan shaqadooda?
Shabakadda bilaa xadhigga ah ma qaban doontaa dhammaan qalabkan?
Ardaydu ma u isticmaalaan ipadka fasalada oo dhan?
Sidee ardaydu ugu soo jeedin karaan barnaamijyo cusub iPadka dugsiga?
Waa maxay kharashka qoysaska ku baxa barnaamijka iPad-ka?
Sidee loo maalgeliyaa barnaamijka iPad-ka?
Muxuu barnaamijka iPad-ka ee Minnetonka u guuleeystey?
Qalab loogu talagalay barashada ama jahwareer badan? - YouTube & Ciyaaraha
Khiyaamada ma dhibaato ayey ku tahay tikniyoolajiyadda?
Sidee waalidku weli u kormeeri karaan ardayga akhlaaqdiisa qadka, marka iPad-ka lagu isticmaali karo meel kasta oo guriga ah?
Noocee amniga ah ayaa la adeegsadaa?
Ka waran haddii ardaydu la kulmaan arrimo farsamo?
Haa. Faahfaahin buuxda oo ku saabsan barnaamijka caymiska iyo tilmaamaha ku saabsan sida loo iibsado caymiska ayaa laga heli karaa halkan .
Arday kasta wuxuu u baahan doonaa aqoonsi isaga u gaar ah oo Apple ah oo loogu isticmaalo iPad-ka. Ardaydu waxay u isticmaali doonaan cinwaanka Gmail ee iskuulkooda aqoonsiga Apple ee u gaarka ah dugsiga ee iPad-kooda si ay si habboon ugu shaqeeyaan. Ardayda bilaabay barnaamijka 1: 1 horaantii waxay isticmaali karaan aqoonsi shaqsiyadeed oo Apple ID ah oo aan ku xirnayn iskuulkooda Gmail. Walaalaha waa inaysan wadaagin aqoonsi isku mid ah Apple, laakiin ay iyagu sameystaan. Hal arday oo Apple ID ah ayaa loo baahan yahay.
Dhammaan ardayda dhigata fasalka barbaarinta carruurta illaa fasalka 12aad waxaa la siiyaa Ipad si loogu isticmaalo waxbarashada iyadoo qayb ka ah barnaamijkeenna iPad-ka 1: 1. Ardaydu waxay u baahan yihiin inay isticmaalaan ipadka ay bixiso degmadu sababo la xiriira ruqsad siinta barnaamijka iyo agabyada wax lagu barto ee lagu rakibayo aaladaha wax lagu baranayo.
Ardayda dugsiga sare waxay awoodaan inay sidoo kale keensadaan laptop ama qalab elektaroonik ah oo shaqsi ah oo loogu isticmaalo kaliya waxbarashada. Isticmaalka aaladaha shaqsiga ah dugsiga waa inay:
U hoggaansanaato siyaasadaha teknolojiyada Degmada
U adeegso ujeeddooyin waxbarasho oo keliya
Uma abuurin carqalad ama carqalad deegaanka waxbarashada
Macallimiintu waxay ikhtiyaar u leeyihiin inay u oggolaadaan ama u oggolaadaan isticmaalka aaladaha elektiroonigga ah inta lagu jiro waqtiga waxbarashada.
Waxaan soo jeedineynaa inaan hakad galno iibsashada kiiboodhka dibedda. Laga soo bilaabo waayo-aragnimadeena, ka dib dhowr maalmood oo aan isticmaaleynay iPad, ardaydu waxay la qabsanayaan kumbuyuutarka shaashadda. Ardayda qaar waxay soo celiyeen kiiboodhkoodii banaanka adeegsiga awgood, laakiin qof kastaa wuu ka duwan yahay. Marka ardaydu dareemaan sida ay ugu raaxeystaan wax ku qorida Ipadka, waxaad si fiican u go'aansan kartaa waxa sida ugu fiican ugu shaqeeya baahidooda.
Isticmaalka stylus waa dookh shaqsiyeed. Arday badan ayaa ogaatay in far ay noqon karto sida saxda oo kale. Sidaa darteed kuma soo jeedinayno inaad iibsato stylus illaa ay ardaydu dareemaan sida ugu fiican ee ay wax ugu qorayaan iPad-ka si ay u go'aansadaan waxa ugu wanaagsan ee baahidooda u baahan.
Ardaydu waxay isticmaalaan xisaabta iskuulka Google Apps ee ay adeegsadaan waxayna u isticmaalaan Google Docs (nooca waxbarasho) kaydinta daruuraha ipad-kooda.
Haa. Shabakadaha isku xirka iskuulka ayaa ku soo kordhay barnaamijka si ay ula kulmaan xawaaraha iyo baahida baahida. Ardayda oo dhami waxay marin u heli karaan shabakadda bilaa-waayirka ah si ay u adeegsadaan aalado kombuyuutar oo gacanta lagu qaadan karo. Shabakada bilaa-waayirku waxay leedahay isla miirayaal ay shabakadda kumbuyuutarka ardaydu leedahay oo dhammaan xeerarka Isticmaalka Degmo ee la aqbali karo ayaa khuseeya isticmaalka shabakadda bilaa-waayirka ah.
Macallimiinta Minnetonka waxay leeyihiin ikhtiyaarka oggolaanshaha ama oggolaan la'aanta isticmaalka aaladaha elektiroonigga ah inta lagu jiro waqtiga waxbarashada. Kala duwanaanta shaashadda taabashada iPad-ka oo lagu dhisay kumbuyuutarka ayaa ka dhigaysa aalad ku habboon dhammaan maadooyinka, laga soo bilaabo farshaxanka illaa Shiinaha illaa muusigga illaa taariikhda.
Marka macallimiintu oggolaadaan isticmaalka aaladaha elektarooniga ah, ardaydu waa inay u hoggaansamaan Xeerarka Teknolojiyada Degmada, u adeegsadaan aaladaha ujeeddooyin waxbarasho oo keliya, waana inaysan u horseedin carqalad ama carqalad deegaanka waxbarashada.
Ardayda ku jirta barnaamijka iPad-ka waxay ku qoran yihiin koorso iPad Schoology ah. Waxaan ardayda ku dhiirigalinaynaa inay wadaagaan talooyinka kor loogu qaadayo isticmaalka waxbarashada ee iPad-ka. Fadlan ku dhiirrigeli ilmahaaga inuu gacan ka geysto wadahadalka adiga oo soo jeedinaya adoo adeegsanaya koorsada iPad Schoology.
Sida aysan wax qiimo ah ugu fadhiyin ardayda buugaagta wax lagu qoro mooyee haddii aysan lumin ama waxyeello gaarin, wax qiimo ah kuma lahan ardayda iPad-ka haddii aysan lumin ama waxyeello gaarin. Barnaamij caymis ikhtiyaari ah ayaa la heli karaa.
Degmadeenu waxay leedahay Levi Aftida Tikniyoolajiyad gaar ah taas oo markii hore ay ansixiyeen dadka degmada dagmada dayrta 2002 ee aruurinta canshuuraha ilaa 2012. Waxaa dib loo cusbooneysiiyay laguna kordhiyay Dayrta 2007 dadka dagmada si loo aruuriyo ilaa 2017, iyo Dayrta 2015 Tixraaca Tiknoolajiyadda Cashuurta waxaa mar kale cusbooneysiiyay oo ay ku kordhiyeen dadka deggan Degmada si ay uga soo ururiyaan illaa 2025.
Sanduuqaani wuxuu bixiyaa:
Smart Boards iyo nidaamyada loo qaybiyo dhawaaqa fasal kasta oo ku yaal Minnetonka
Wareeg beddelaad tiknoolaji ah
Kaabayaasha shabakada xasilloon, keydinta iyo shaandhaynta
Kordhinta helitaanka ilaha internetka
Horumarinta shaqaalaha isdhexgalka tikniyoolajiyadda wax ku oolka ah manhajkeena oo dhan
Doolarka tikniyoolajiyadda lama tartamo maalgelinta kale ee dugsiga ee howlaha socda, macallimiinta fasalka ama sahayda fasalka. Sharci ahaan, lacagaha Aftida Teknolojiyada waxaa loo isticmaali karaa oo keliya tikniyoolajiyadda iyo qalabka waxbaridda.
Tilmaamihii hore ee tijaabiyahayaga iPad-ka waxay muujiyeen natiijooyin lagu qiyaasi karo ururka ardayda, ku guuleysiga ardayda, iskaashiga ardayda oo kordhay iyo kororka tirada qiimeynta qaabeynta ee ay macallimiintu u adeegsadaan hubinta barashada ardayda.
Waxaan ku gaar nahay hawlgalkeena barnaamijka iPad-ka:
Degmadeennu waa hoggaamiye qaran oo adeegsanaya tikniyoolajiyadda si loo dardar-galiyo barashada. Laga soo bilaabo 2002, markii aan rakibnay Guddiyadeenii ugu horreeyay ee SMART, macallimiintu waxay dijitaarinayaan manhajka iyo qalabka wax lagu barto. Si ka duwan iskuulo kale oo badan oo isticmaala ipad, kuma tiirsanaano kaliya barnaamijyada dhinac saddexaad si aan wax u dhigno; macalimiinteenu waxay ku tiirsan yihiin manhajka Minnetonka inay wax baraan. Macalimiintu waxay sii wadaan inay soo diraan qoraalo iyo shaqooyin kooras ah, oo ardaydu ku soo dejisan karaan ipad-kooda, kuna darayaan qoraalo u gaar ah, dhammeystiraya shaqadooda iyo ku soo celinta casharrada guriga macallimiinta iyagoo adeegsanaya ipadka.
Macallimiinteennu waxay diiradda saaraan qiimeynta qaabeynta (ku celcelinta shaqada guriga iyo su'aalaha) si loo qiimeeyo barashada ardayga inta lagu guda jiro casharka. Cilmi-baaristu way cadahay in markay macalimiintu isticmaalaan qiimeynno qaabeysan oo isdaba joog ah, ay si fiican u awoodaan inay cabiraan barashada ardayga, ku celiyaan waxyaabaha haddii loo baahdo, ama ay u gudbaan haddii qof kastaa fahmo. Qalabka iPad-ka, oo ay weheliso Schoology ama Skyward qiimeynta qaabeynta, ayaa u oggolaanaya macallimiinta inay si hufan u maareeyaan iyo qiimeynta qaabeynta fasalka, taasoo u oggolaanaysa faragelinta waqtiga ku habboon haddii ardaygu aanu fahmin fikradda.
Ardaydeena waxay u qaataan ipadka guriga, sida ay buugaagtooda wax ugu qaadan lahaayeen guriga. IPad-ku wuxuu keydsadaa qoraalkooda, shaqadooda guriga, qoraalada macalimiinta iyo dhamaan waraaqaha ay caadi ahaan ku keydin lahaayeen galka, dhammaantoodna waxay ku wada jiraan hal meel. Ardaydu way ka habaysan yihiin, shaqada guriga-na gacanta ayay ku hayaan meel kasta, iyo wakhti kasta. Markay ardeydu aqrinayaan sheeko, ardaydu waxay si toos ah wax ugu aqrin karaan ugana qori karaan iPad-ka, oo isna leh qaamuus iyo qoraal kooban.
Waxbadan ka baro sida loo isticmaalo ipad-ka fasalada Minnetonka
Tiknoolajiyadda oo carqalad ku noqon karta ayaa run u ah dhalinyarada maanta. Shaqaalaheennu waxay yeesheen doodo badan oo ku saabsan baahida loo qabo in la baro ardayda inay u adeegsadaan tiknoolajiyadda si masuuliyad leh. Waxaan dooneynaa inaan sameyno baristaas markay iskuulka joogaan, sidaa darteed kuma qalin jabinayaan caadooyin xunxun, laakiin taa badalkeeda waan ogahay sida loola dhaqmo waxyaabaha jeediya marka ay kaligood yihiin.
Degmo dugsiyeedyo badan ayaa isticmaala YouTube. Kooxdayadu waxay ka wada hadleen qiimaha YouTube-ka inuu yahay qalab wax lagu barto iyo saamaynta ku yeelan karta furitaanka YouTube-ka ardayda adeegsada. Ardaydu waxay ka heli karaan YouTube-ka ipad-kooda. Waxaan aaminsanahay in abuurista bandhigyo badan oo warbaahin ah si loo muujiyo fikradaha inay tahay xirfad qarniga 21aad muhiim ah. Haddii loo baahdo, waalidiinta iyo / ama macallimiinta ayaa tixgelin kara isticmaalka marin hagida ama xaddidaadda kuwaas oo u oggolaanaya degellada sida YouTube-ka la xannibo.
Si loo dhiso awoodda adeegsiga tikniyoolajiyad cusub, dadku waxay u baahan yihiin inay awood u yeeshaan inay u adeegsadaan aaladaha howlaha iyo xilliga firaaqada labadaba. Waxaa jira ciyaaro ka socda iPad-ka, sida keli keli keli, oo bilaash ah oo da 'ku habboon. Waxaan aaminsanahay inay qiimo leedahay barida ardayda inay jirto waqti hawl la qabanayo, iyo waqti nasasho. Waxaan dooneynaa inay bartaan xirfadahaan is-edbinta ah ee muhiimka ah inta ay kormeerayaan waalidiinta iyo macallimiinta, maahan marka shaqadooda ay qadka ku jiraan qof weyn.
Waxa kale oo muhiim ah in la ogaado in ciyaaraha laga helo iPad-ka sidoo kale laga heli karo shabakada, oo ay ardayda si fudud ugala soo bixi karaan kombiyuutar kasta oo desktop ama taleefanka gacanta ah.
Macallimiintu waxay adeegsanayaan xeelado dhowr ah si ay u hubiyaan inay ardaydu ku hawlan yihiin oo ay hawshooda hayaan inta ay ku jiraan fasalka, laakiin sida fasallada kale waxaan u baahan nahay inaan sii wadno kormeerka. Waxaan aragnay arday ku doodaya khad elektaroonig ah, sida aan u aragno iyaga oo warqad ku doodaya. Laakiin, waxaan aragnaa carqaladeyn yar markii ardaydu ay farsamada gacanta ku hayaan cashar soo jiidasho leh marka loo eego markay qoraalada ka qaadanayaan muxaadaro.
Daacadnimada tacliimeed waa mudnaanta koowaad. Macallimiinta Minnetonka, sida dhammaan macallimiinta, waxay ka walaacsan yihiin qishka waxayna si joogto ah uga hadlaan xeelado looga hortago qishka dhammaan fasallada.
Waqtigan xaadirka ah, inta badan qiimeynta qaabeynta (shaqada guriga iyo su'aalaha dhaqanka) waxaa lagu qaadaa iPad-ka. Qiimaynta isugeynta ah, oo ka dhigan 85% ee darajada, ayaa wali inta badan lagu qaadaa warqad iyo qalin, marka laga reebo waraaqaha ingiriisiga ah ee lagu soo gudbiyo Turnitin.com si loo hubiyo in la xaday.
Haddii ardaydu doortaan inay khiyaameeyaan qiimeynta qaabeynta, iyagu iyagu is-beddel ayey ku yimaaddeen sababtoo ah markaa macallinkoodu ma oga waxa ay ardayda uga baahan yihiin caawinaad dheeri ah barashada. Sida ciyaartooy ka dabacsan ficil ahaan wali raba inuu ciyaaro ciyaarta, haddii xirfadaha loo baahan yahay aan la horumarin, ciyaartooygu wuxuu ku dambeyn doonaa kursiga keydka wuxuuna baran doonaa inuu si dhab ah u qaato tababarka. Waxaa muhiim ah in la xasuusnaado in qiimeynta qaabeynta ay tahay ku dhaqanka tacliinta iyo wadarta kaliya 15% ee fasalka guud.
Dhammaan iPads-yada Dugsiga Minnetonka waxay leeyihiin barnaamij shaandheyn ah oo lagu xirayo marin-u-helidda baraha aan habboonayn iyadoon loo eegin haddii qalabku yaalo dugsiga ama banaanka xerada. Miirahaas ku-dhex-jira ayaa ka adkaanaya shaandheyn kasta oo aad ku yeelan karto guriga. Qaar badan oo ka mid ah router-yada guryaha ayaa oggol in waqti loo dejiyo taraafikada shabakadda, sidaa darteed waalidiinta ayaa dooran kara inay tan sameeyaan.
Qalabka Apple Time Screen wuxuu sahlayaa fahamkiisa isticmaalka tiknoolajiyadda. Astaantani waxay awood u siineysaa isticmaaleha (ama waalidka) inuu dejiyo xaddidaadda iyo xannibidda barnaamijyada, u abuuro hoos u dhigis shaqo-guri / hurdo / casho iwm, dejiyo ilaalinta erayga sirta ah haddii loo baahdo iyo in ka badan. Waxay sidoo kale wadar tahay waqtiga lagu qaatay barnaamijyada, tirada jeer ee qalabka la daarayo iyo tirada ogeysiisyada la helay. ( Xusuusnow in Apple Screen Time loo isticmaali karo iPads-ka iskuulka, laakiin kormeerka fog ee ka shaqeeya kama shaqeyn doono iPhone-kaaga shaqsiyeed iyada oo loo marayo Wadaagista Qoyska sida ay u sameyso si loola socdo iPhone-ka ilmaha laga helo waalidka iphone.)
Waalidiintu waxay dejin karaan xannibaadda goobta oo dheeri ah, sida xannibaadda YouTube-ka haddii loo baahdo, iyada oo loo marayo marin-u- hagida iPad iyo Xaddidaadda iPad-ka.
Carruurtu inta badan waxay helaan marin dhammaystiran, oo aan xadidnayn oo ay ku galaan goobo aan habboonayn oo ku yaal aaladaha kale sida kombuyuutarada guriga iyo taleefannada gacanta ee gaarka ah. Khubaradu waxay si adag u soo jeedinayaan in la rakibo softiweer si loo shaandheeyo loona xayiro waxyaalaha aan habboonayn ee shabakaddaada guriga ee bilaa wireless. Ka aqriso waxbadan oo ku saabsan miirayaasha boggeena Dijital Caafimaadka & Fayoqabka .
Dhammaan ipadyadu waa lambar sir ah waxayna leeyihiin sumado hantiyeed oo loogu talagalay kaydinta. Waxaan sidoo kale ardayda ku dhiirigelinaynaa inay shakhsiyeeyaan kiiskooda oo ay magacooda ku yeeshaan kiiskooda. Ardayda sidoo kale waxaa la farayaa inay sameystaan aqoonsi Apple ah ayna adeegsadaan barnaamijka Find My iPhone. Barnaamijkani wuxuu ka caawiyaa ardayda inay helaan aaladda maqan, khariidadna, la ciyaaro dhawaaq, soo bandhigaan farriin, meel fogna laga xidho qalabka, ama la tirtiro dhammaan xogta ku jirta. Dhammaan ipadyadu waxay u baahan yihiin lambar sir ah oo uu dejiyo isticmaalaha.
Marka arrimo farsamo ay soo if baxaan, macallimiintu way fahmaan ardaydana lama ciqaabo. Macallimiintu kama mamnuucaan ardayda inay ku dhammaystiraan shaqooyinka warqad. Shaqaalaha Xarunta Warbaahinta iyo macallimiinta fasalka waxay ku faraxsan yihiin inay si gooni gooni ah ula kulmaan ardayda si ay uga caawiyaan xallinta arrimaha farsamada. Mararka qaarkood, ardaygu wuxuu u baahnaan karaa inuu iska tuuro ipadka maalintii, laakiin maadaama shaqadii oo dhami ay ku keydsan tahay daruuraha, waa inaanay carqalad ku noqon helitaanka shaqada.
Xirfadaha nolosha ee muhiimka u ah ardayda waa inay bartaan keydinta iyo kaydinta shaqada (on desktop ama qalab kale). Iyagoo adeegsanaya keydinta daruurta, ardayda iPad-ka waxay si gaar ah ugu kaydiyaan shaqadooda iPad-ka Google Docs. Ardaydu waxay heleen waxbarid ku saabsan nidaamkan macallimiintuna waxay xusuusinayaan ardayda muhiimadda ay leedahay in sidaas la sameeyo.